ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အလောသုံးဆယ် ကိုပေါ”
ကျွန်တော်တော့ စစ်မနေတော့ဘူး.. ရိုက်ပြီးတာနဲ့ တင်ချင်နေပြီ။ အချိန်ကလည်း မရဘူးလေ။ (ဒီလိုပဲ ဆင်ခြေ ပေးရတာပေါ့) နောက်နေ့ပြန်ကြည့်ရင် စိတ်တိုင်းမကျတာတွေ တွေ့ရရော။ အဲဒီ အချိန်မှာ အတော် များများက ဖတ်ပြီးနေပြီ။ ဘလော်ဂျာကလည်း အမှားတွေ တွေ့ရင် ပြောပြပါတယ်။ ကြီးကြီးမားမား ဆိုရင်တော့ ပြင်လိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တာပဲ။ စာအုပ်တိုက် ပို့သလို (မလုပ်ဘူးပါဘူး ကြားဖူးတာ ပြောတာ) စာလုံး ပေါင်းမှားရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေးတာ မပြေပြစ် ၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းလို့ ပယ်ချတာမျိုးဆိုရင်တော့လည်း စစ်မိရင် စစ်မိမည်။ တကယ်တော့ အဲဒါမျိုး ကြောက်လို့ တစ်ခါမှ ပို့ဖို့ စိတ်ကူးမရတာ။ ယောင်လို့တောင် စိတ်မကူးဖူးပါဘူး။ အစတုန်းကတော့ publish မလုပ်ခင် အစအဆုံး တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်သေးတယ်။ အခုဆို ဖတ်တောင် မဖတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီလို့ ဖြစ်နေရော။ ကိုပေါလည်း ဘလော်ဂျာ (Blogger + Manager) ခန့်ထားပေါ့။ Proof ဖတ်ဖို့။ အစတုန်းက ဘလော်ဂျာ ကို အရင် ပေးဖတ်သေးတယ် .. နောက်တော့ စာပေစိစစ်ရေးက တင်းကျပ်လာလို့ ရုံးမှာ ရေးပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း publish လိုက်တာပဲ.. ဟီးဟီး နောက်တာ.. ရေးပြီးတာနဲ့ တင်ချင်နေတာကို ပြောပါတယ်။
Andy Myint... ကိုအင်ဒီရေ…
ကျနော့်ဘလော့ဂျာလည်း အိမ်မှာ ပို့စ်မတင်ခင် ဦးဦးဖျားဖျား ဖတ်ခွင့်ရရင်တော့ အမှားလေးတွေကို ပြင်ဆင်ပေးတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူလည်း ဘလော့ဂျာပီပီ ခေသူမဟုတ်ပေါ့ဗျာ။ Proof ဖတ်ရုံလောက်နဲ့တော့ ဘယ်တင်းတိမ်နိုင်ပါ့မလဲ။ တဆင့်တက်ပြီး ကျနော့်ရဲ့ “အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ” နဲ့ “အရေးအသားပိုင်းဆိုင်ရာ” ညံ့ဖျင်းမှုလေးတွေကို မသိမသာထောက်ပြလာတဲ့အခါ ကျနော်ကလည်း ပုရိသမာနနဲ့ အနာပေါ်တုတ်ကျသလို မခံချိမခံသာ နာတတ်လေတော့ နောက်ပိုင်းမှာ (စိစစ်ရေးနဲ့ ဝေဖန်ရေးကို ကျော်လွှားတဲ့အနေနဲ့) ဘလော့ဂျာအလစ်မှာ ဒရောသောပါး တင်လိုက်တာမျိုးလေးတွေ လုပ်လာရတော့တာပေါ့။ (အဟီး…. သွားမပြောနဲ့နော်…. ကျနော့်ဘလော့ဂျာ စိတ်ကောက်သွားလို့ ဘလော့ဂ် ရေးသားခွင့်ကို ပိတ်ပင်နေဦးမယ်။)
အော် သူတို့နှစ်ယောက်က ဘလောက်ဂျာ ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်ရတာ ဘလောက်ဂျာ တွေကို ဦးစားပေးသလိုလိုနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေကြတာပါပဲလား။အလောသုံးဆယ်ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးသကာလ ကိုပေါ အမြင်မှန်ရနေပြီ ဟုဝမ်းသာမလို့ရှိသေး ............အင်း ....အင်း.....
ဘလော်ဂျာရှိကြောင်း ကြုံတုန်းဝင် ကြွားပါသည်။
နောက်ပိုင်း ဘလော်ဂျာ မအားတာများတော့ ကိုယ်လည်း လုပ်ချင်တာလုပ်.. :D
ကိုပေါပဲ မကြာသေးခင်က ဣထိယ အခွင့်အရေးများ ဆွေးနွေးခဲ့လားလို့
မိန်းမလဲ လူပဲ ဘာပဲနဲ့
ခဲ - ရေ - သဲ တို့နဲ့ ခိုင်မြဲစေသားပေါ့ဗျာ။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုး ...း)
တခါတလေ မညီမညာ မလှမပ စာလုံးပေါင်းတွေက ကပေါက်တိကပေါက်ချာနဲ့ …
လာဖတ်တဲ့သူတွေ အားနာပြီးရင်း အားနာရင်းလေ…
ကိုပေါ။ မရေးအားဘူးဆိုရင်လေ.ဝန်ခံပါလေ။ ဟိုဟိုဒီဒီတွေ ဆင်ခြင်တွေ ရိုးနေပြီ။
ရေးကြပါ။ ရေးကြပါ။ အမှားများလေ အဖော်ရလေဘဲ။
စာကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ သဒ္ဒါ တွေ ကြိယာတွေ အရေးကြီးတာ မှန်ပေမဲ့ အခုလို မနည်း အသက်ရှူ လုပြီး ဘလော့နေရတဲ့ သူတွေ အားလုံးတွေ ချည်းဘဲမို့ နားလည် စာနာထားပြီးသားဘဲ။ သိတ်ဆန္ဒရှိရင်တော့လည်း လုပ်ပေါ့လေ။ အဓိက ကတော့ စာကို ဖတ်ချင်တာပါဘဲ။ စာမချောလဲကိတ်စ မရှိ။ လူချြောီ့ပီးသားဘဲ ။ဂရုသိတ် မစိုက်ပါနဲ့။ မဖတ်ရဘဲ နေလိမ့်မယ်။
ဘာမှမပူပါနဲ့ ကိုပေါရေ ...။ ဖြည့်စွက်ပြီးနားလည်ပါတယ် ...။ အခုလည်း ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေသလို ... ဆိုလိုရင်းကိုလည်းနားလည်နေတာပါပဲ ..။
broken burmese languageပေါ့ဗျာ ကိစ္စမရှိပါဘူး
>> Anonymous ... ကြည်.... ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပါပဲ။ ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာ....ဟိ။
>> N3 ... ဂလိုလား။ နောင် ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပြီး ခြေခင်းလက်ခင်းသာတဲ့အခါကျမှ ဘလော့ဂျာ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပေးဦးမှပဲ။း-)
>> Rita .... ယောက်ျားလေးတို့မာန၊ မိန်းကလေးတို့ ဘဘာဝ...အခါလွန်တဲ့မိုးမို့ အငြိုးနဲ့ရွာ.......တဲ့။ ယောက်ျားလည်း လူပါပဲ ခင်ညာ။း-)
>> တားမြစ်ထားသော .... ခိုင်မြဲရမယ်လေ။ တပ်မတော် ခဲ၊သဲ၊ရေ စစ်ကြောင်းကြီးများ ချီတက်လာပြီ။း-)
>> တန်ခူး .... နောက်တခါ မညီညာရင် လာပြီ ဒဏ်ငွေကောက်မယ်။း-)
>> khin oo may .... အတင်း ၀န်ခံခိုင်းနေပုံထောက်ရင် အခုတလော တစခန်းထနေတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်နဲ့ ညီအစ်မ တော်သလားမသိ။ (သိချင်ရင် ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုက်မှာ သွားဖတ်ပါရန်)။
လူချောပြီးသားကတော့ အများသိပြီးသားမို့ ဒီနေရာမှာ တခါထပ်ပြီးမပြောတော့ပါဘူး။း-)
>> ကေကေ .... အလောသုံးဆယ် မဖတ်ပါနဲ့။ စာကောင်းတို့မည်သည်မှာ ကြေကြေညက်ညက် ၀ါးစားပြီး မြိုချတန်သင့်လျှင် မြိုချရမည်တဲ့။း-)
>> Anonymous .... အင်း...ဟိုဘုန်းကြီး ပြောသလိုတော့ဖြစ်နေပြီ။ “ကျောင်းကို ငါ့ဟာငါ ရရစ်နဲ့ ကြောင်းတော့ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ ဘယ်မအေပေးက အိမ် လို့ ဖတ်ချင်သေးလို့လဲ။”....ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးလေ။
>> အောင်ကိုကိုထိုက် .... အဲဒီလိုနဲ့ ဘရုတ်ကင်းတွေ များနေပြီဗျ။
broken burmese များများလာရင် i feel မြန်မာပြည်ကမြေပဲယိုလမ်းတွေပေါ်ကားစီးနေရသလိုပဲ